Zviitiko - International Writing Centres Association
Sangano reInternational Writing Centers Association rinogadzira zviitiko zvina zvegore kubatanidza nhengo dzedu uye kusimbisa vanyoreri vepakati nevashandi.
Musangano Wegore Negore (kudonha kwese)
Musangano wedu wekudonha ndicho chiitiko chedu chikuru chegore ne600-1000 + varipo vanotora chikamu mumazana ehurukuro, mashopu, uye tafura dzekutenderera pane chiitiko chemazuva matatu. Musangano wepagore chiitiko chinogamuchira chevatsva uye vane ruzivo rwekunyora nzvimbo varairidzi, vadzidzi, uye nyanzvi. pano.
Summer Institute (zhizha rega rega)
Yedu yeChirimo Sisitimu musangano wevhiki-refu wakasimba wevanosvika makumi mashanu makumi mashanu ekunyora nzvimbo nyanzvi kuti vashande ne45-5 vane ruzivo rwekunyora nzvimbo vadzidzi / vatungamiriri. Iyo Summer Institute inzvimbo huru yekutanga kune nyowani vekunyora nzvimbo vatungamiriri.
Yepasi Pose Kunyorera Nzvimbo Svondo (yega Kukadzi)
The IWC Vhiki yakatanga muna 2006 senzira yekuita kuti nzvimbo yekunyora ishande (uye kuyemura) kuonekwe. Inopembererwa gore negore kumativi eZuva raValentine.
Inobatanidza @ CCCC (yega yega chitubu)
Iyo yezuva-rimwe Kubatirana musangano wepagore wemusi weChitatu pamberi peCCCC (Musangano weKoreji Kuumbwa & Kutaurirana) inotanga. Vakatenderedza zana vatori vechikamu vanosarudza kubva panguva dzinoenderana pane yekunyora nzvimbo theme. Vatauri uye vanopinda vanokurudzirwa kushandisa iyo Kubatana kuti vawane mhinduro uye kurudziro pamapurojekiti ari kuitika.
Unoda kusvika kune vatinopinda uye nhengo? Sponsor chiitiko!
Unoda kuitisa remangwana IWCA chiitiko? Tarisa yedu yechiitiko sachigaro mutungamiriri.